Uhlelo Lokubuyekezwa | Bomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, uViolet, iGreen Laser Pointer | I-Laser - TorLaser.com
Ngenxa yokubuyekezwa kohlelo lwethu ungalanda kuze kufike ku-10% wento yakho oyithengile njengesigqebhezana sesaphulelo sokuthenga kwakho okusha kuwebhusayithi yethu.
Yenza umbono ngemuva kokuthenga kwakho esizeni sethu futhi uthole ngokubuyisa nge-imeyili isigqebhezana esingafika ku-10% senani lesihloko esicabange ukusisebenzisa ekuthengeni okulandelayo.
Izinhlobo kanye nembuyekezo yokubuyekezwa
- Ukubuyekezwa Okubhaliwe: 2% isaphulelo - Bhala ukuphawula okuvela esigabeni sokubuyekezwa sekhasi lezinto ozithengile. Ungakhuluma ngomuzwa wakho wokuthenga futhi wazi izigaba ezahlukahlukene ezinjengekhwalithi yomkhiqizo noma insizakalo etholwe ngokushesha.Isibuyekezo sakho sizosiza abanye abathengi.
- Ukubuyekezwa kwesithombe: 3% isaphulelo - Yenza izithombe zakho zomkhiqizo bese uzithumela kithi nge-imeyili yethu: info@torlaser.com ngesibuyekezo Sendaba. Sicela ufake ikhodi yakho yoku-oda, igama nesibongo ukuze sikhombe okungokwakho.
- Ukubukeza ividiyo: 5% isaphulelo - Rekhoda i-unboxing yevidiyo yokuthenga kwakho, noma ngokuhlola ... Ungathumela ividiyo njengesixhumi ku-imeyili yethu futhi sizongena esiteshini sethu se-YouTube, noma uma ukhetha ukulayisha esiteshini sakho bese uthumela isixhumanisi sokuthumela isixhumanisi sakho ngqo. Le yi-imeyili yethu: info@torlaser.com, khumbula ukubeka udaba Ukubuyekezwa. Sicela ufake ikhodi yakho yoku-oda, igama nesibongo ukuze sikhombe okungokwakho.
Ungenza izinhlobo ezi-3 zokubuyekezwa ngakunye kwezinto ozithengile ukuze uthole isaphulelo esingu-10% esatholakala ngesimo isigqebhezana, noma kuphela lezo ozithandayo.
Isibonelo: Uma uthenge i-laser pointer GreenMagic iye ku-89 € futhi uyenza Ukubuyekezwa okugcwele kwalezi zingxenye ezintathu (10%), uzothola isigqebhezana sesaphulelo sika-8.90 € ekuthengeni kwakho okulandelayo!
- Ngingenza ukubukeza into ngayinye ehlukile oyithengile, awunakwenza ukubukeza leyo ndatshana uma uyithengile amayunithi amaningana.
- Kokubili ukubekwa kwamazwana, ividiyo nezithombe ozithumelayo zikhululekile ekukhetheni kwakho, asilinganiseli isilinganiso esiphezulu noma ubuncane bokuqukethwe.
- Iminikelo ye-Material kumele yenziwe nguwe, awuvunyelwe ukukopisha okuqukethwe kwamanye amasayithi.
- Nguwe kuphela ongasebenzisa isigqebhezana sesaphulelo ngokuthenga ngakunye.
- Ungaqoqa amakhuphoni amaningi njengoba uthola.
- Njalo isigqebhezana sisebenza unyaka owodwa okufanele sisisebenzise.
- Njalo isigqebhezana ukusetshenziswa okukodwa.
- Amakhuphoni angawomuntu siqu, awakwazi ukudluliselwa noma ukuhlengwa kwabanye abasebenzisi.
- Sigodle ilungelo lokukhansela noma yikuphi ukuthenga lapho kunobufakazi bokusebenzisa kabi ukubuyekezwa kohlelo, futhi sikhansele, simise okwesikhashana noma siguqule imigomo yalolu hlelo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokuthola isaziso.
Uma udinga ulwazi olwengeziwe mayelana nokubuyekezwa kohlelo lwethu noma ufuna ukuzitholela thina ngokuchofoza umbuzo lapha.